ग्राउण्ड जिरो : यस्तो डरलाग्दो रहेछ पथरी काण्डको नालीबेली - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ११, २०७६ समय: १४:१९:१२
पथरी । गत शनिबारदेखि अशान्त बनेको मोरङको पथरीशनिश्चरे बुधबार बिहानबाट क्रमश शान्त बन्दै गएको छ । सोमबार र मंगलबार दिनभर तनावग्रस्त बनेको पथरी बजार क्षेत्रमा प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न दर्जनौ सेल अश्रुग्याँस समेत प्रहार गर्नुपर्यो । पथरी घटना कसरी भयो र यस्को भित्रि पाटो के हो भन्ने बिषयमा हामीले फिल्डमा पुगेर केही तथ्यहरु सार्बजनिक गर्ने कोशिष गरेका छौँ ।
कसरी शुरु भयो पथरीमा आन्दोलन ?
शनिबार बिहान मर्निङ वाक गर्ने स्थानीयले पथरी १ मा एउटा नग्न शव घोप्टो परेको अबस्थामा देखे । प्रहरीले खबर पाएपछि आएर हेर्दा सोही स्थानमा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गर्दै आएकी २९ बर्षिया रिना बस्नेत (रुपा) को शव भएको पुष्टि भयो । त्यसपछि हल्लाखल्ला शुरु भयो । रिनाका श्रीमान दुबईमा थिए । उनी १४ बर्षिया छोरा साईमन सँग पथरीमा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गर्दै आएकी थिईन । नग्न अबस्थामा भेटिएको शव मोष्टमार्टमका लागी प्रहरीले लाने कोशिष गरेपनि मृतकका आफन्त र स्थानीयले केहीक्षण शव उठाउन दिएनन् । तर प्रहरीलाई जबरजस्ती शव उठाएर धरान पुर्यायो ।
घटना भएको अघिल्लो दिन के भएको थियो ?
शुक्रबार दिनभर पसलमा बसेकी रिना साथीको छोराको जन्मदिनमा छोरा सहित साँझ गएकी थिईन । उनको फोन बाराम्बर आईरहेको थियो । उनका साथीहरुका अनुसार उनको फोन अरुबेला पनि त्यसैगरी आउने गर्दथ्यो । उनी जाने भन्दै हतार गर्न थालिन । बेलुका करिब ८ बजे उनी निस्किने तयारी गर्दा उनलाई केही खाएर जाने आग्रह पछि उनले २ पिस मासु खाईन,जन्मदिनमा टिका लगाईदिईन,अनि हतारमा त्याँहाबाट बाहिरिन । त्यहि रात पथरीमा कन्सर्ट आयोजना भएको थियो । उनीहरु आमाछोरा सिधै कन्सर्टमा गए । उनीहरु राति करिब ११ बजे कोठा फर्किए । सधै बियर खाने आमालाइृ त्यसदिन पनि छोराले नजिकैको पसलबाट बियर ल्याईदिएका थिए । उनले भने स्प्राईट खाए । राति दुबईबाट बाबाको फोन आयो ।
दुबैजना बोले उताबाट चाँडै नेपाल आउने बताए । रिनाको फोनमा त्यस अघि देखि नै कमल नेपालको फोन आईरहेको थियो । कमल नेपाल पथरीका ब्यापारी हुन । स्थानीय र रिनाका छोराका अनुसार कमल सँग उनको समबन्ध पुरानो नै हो । कमलले नै रिनालाई खर्च दिने समेत गर्दथे । छोरा साईमनका अनुसार कमलले उनलाई समेत मोबाईल किनिदिएका थिए । राति लगभग १२ बजेतिर साईमन सुते,उनी सुतेपछि के के भयो उनलाई केही थाह भएन । भोलिपल्ट घटनापछि अरुले नै उठाएपछि मात्र उनले थाह पाए ।
घटनाको दोस्रो दिन के भयो ?
घटना भएको भोलिपल्ट आईतबार स्थानीय र आफन्तले रिनाको हत्या भएको बताए । तर प्रहरीले सोही घटना मादक पदार्थ सेवन गरी बाथरुम जाने क्रममा लडेर आफै मृत्यु भएको बतायो । यो कुरा स्थानीयले पत्याएनन । कोठामा बियरका बोतल र भित्रिी कपडा समेत भेटाएको भन्दै प्रहरीले आँखामा छारो हाल्न खोज्यो । तर स्थानीय र आफन्तले रिनाको हत्या भएको भन्दै आक्रोश पोख्न थाले । यहि बिचमा छोरा साईमनले कमल नेपाल र आमाको समबन्ध बारेमा बोलेपछि घटनाले अर्को रुप लियो । स्थानीयले कमल नेपालले हत्या गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई पक्राउ गर्न माग गर्न थाले ।
घटनाको तेस्रो दिन आन्दोलनको रुप
घटना भएको तेस्रो दिन प्रहरीले आफनो अडान छोडेन । स्थानीयले दिनभर घटनाको बिरोध गरे । प्रशासन सँग छलफल गरे तरपनि समस्याको समाधान निस्किएन । साँझ स्थानीय कविता पराजुलीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरियो । मृतकका श्रीमान पनि बिदेशबाट पथरी आए । घटनाले नयाँ मोड लियो । कमल नेपाल लाई हत्याको आरोप लगाउँदै पक्राउ गर्न माग सहित प्रर्दशन र चक्काजाम गरियो । स्थिति तनावपुर्ण भएपछि साँझ कमल नेपाल ईलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीको सम्पर्कमा आए । ईलाका प्रहरी कार्यलय पथरीका ईन्स्पेक्टर कमल बजगाँईले मेयर दिलिप राईलाई कमल पक्राउ गरेको बताए । सो हल्ला फैलिएपछि स्थानीय थप आक्रोशित भए ।
घटना भएको चौथो दिन मंगलबार बिहानैदेखि पथरी तनावग्रस्त बनयो । स्थानीयले नगरपालिकामा तालाबन्दी मात्र गरेनन् गेट नै फोडेर प्रर्दशन गरे । त्यसपछि ईलाका घेराउ गर्न गएका स्थानीयले नाराबाजी सहित ईलाकाको गेटमा ढुंगामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले ३० सेल बढी अश्रुग्याँस प्रहार गर्यो । ५ जना सथानीय र ३ जना प्रहरी गरी ८ जना घाईते भए । सोही घटनाको बिरोधमा स्थानीयले चक्काजाम सहित टायर बालेर बिरोध शुरु गरे ।
प्रहरीले फेरी अश्रुग्याँस प्रहार गर्यो । आसपासका अस्पतालमा रहेका बिरामी मात्र नभएर अन्य स्थानीयलाई समेत समस्या भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि पथरीका मेयर दिलिप राई र उपमेयर यमुना बिष्ट बाँस्तोलाले सडकमा निस्किएर प्रहरीलाई पछि हट्न आग्रह गरेपछि स्थिति केही सामान्य बन्यो । त्यसपछि प्रशासन र संघर्ष समितिका बिच बार्ता भएपछि ३ दिनका लागी प्रहरीले समय माग्यो र स्थानीय पछि हटे ।
यस्तो थियो प्रहरीको तयारी
आन्दोलन मत्थर नभएको भए प्रहरी पछि हट्ने स्थितिमा थिएन । हवाई फायर र अश्रुग्याँस प्रहार गरिसकेको प्रहरीले गोली चलाउन र कर्फयु आदेश जारी गर्न सक्दथ्यो । त्यसको तयारी समेत भईसकेको अबस्थामा बार्ताका माध्यायमबाट केही राहत भएपनि सोही प्रकृतिको आन्दोलन नहोला भन्न सकिने अबस्था अझै छैन ।
मेयर उपमेयर नै सडकमा
सम्भवत यो पहिलो घटना होला, मेयर र उपमेयर नै आन्दोलनमा उत्रिएको । सोमबार देखि नै स्थानीय सँगै सडकमा उत्रिएकी उपमेयर यमुना बिष्ट पराजुली मंगलबार समेत आन्दोलनको अग्रभागमा उभिईन । जनता भन्दा ठुलो आफनो लागी कोही नहुने भन्दै उनी जनता सँगै सडकमा उत्रिएपछि स्थानयिलाई थप बल पुग्यो । यसअघि पटक पटक बिवादमा परकी उपमेयरले यस पटक स्याबासी पाईन । उनको वाहवाही समेत भएको छ । उनले देखाएको आँट र साहसको स्थानीयले प्रंशंषा समेत गरेका छन । मंगलबार भने मेयर समेत सडकमा उत्रिए ।
घटनाको भित्री पाटो
पछिल्लो घटना रिना बस्नेतको हत्या सँग मात्र जोडिएको छैन । यसअघि पथरीमा भएका ५ वटा घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले देखाएको सुस्तता र अलमलका कारण पनि यो घटनाले आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गर्नुको मुख्य पाटो हो । प्रहरी सँग पथरीबासी सन्तुष्ट छैनन । कारण कुनैपनि घटनामा प्रहरीले चित्तबुझदो अनसुन्धान गर्न सकेको छैन । करिब १ महिना अघि भएको सिक्का बार काण्डले त झनै प्रहरी प्रति स्थानीयलाई बितृष्णा जगाएको छ । पिडितहरु अझै अनुसन्धान फितलो भएको बताईरहेका छन । पछिल्लो घटनाक्रममा सोही घटना र पिडितहरु समेत जोडिएका छन ।
पथरीका स्थानीय अझै त्रासमा छन । उनीहरु खुलेर बोल्न चहादैनन् । तरपनि प्रहरीप्रति उनीहरुको आक्रोश कायमै छ । यसअघिका घटना क्रम देखि पछिल्लो घटनालाई नियल्ला प्रहरीको अनुसन्धान बेकामे बनेको उनीहरुको बुझाई छ । रिना जस्तो चरित्रको भएपनि उसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको छ । यहाँ उनको चरित्रको दोष भन्दा पनि उनको बाँच्न पाउने अधिकार हन्न भएको बिषय प्रमुख हो । उनको आत्माहत्या भन्ने प्रहरीको जवाफ स्थानीयलाई चित्त बुझेकै छैन । कुनैपनि हालतमा रिनाको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने नत्र जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको कुरामा स्थानीयको एकमत रहेको छ ।
सोही रातको सिसि क्यामेरा फुटेजमा के छ ?
प्रहरलिे घटनापछि रिनाको मोबाईल र कमलको मोबाईल नियन्त्रणमा लिईसकेको छ भने सोही रातको सिसि क्यामेरा फुटेजमा कैद भएको दृश्यको अनुसन्धान भईहरेको छ । सोही दिनको फुटेजमा माक्स लगाएको एक ब्यत्तिले अटोरिक्सामा बोराले छोपेर केही सामान ल्याएर घटनास्थलमा फालेको देखिएको छ । यी प्रमाणहरुले उनको अन्यत्र लगी हतया गरेर सोही ठाँउमा ल्याई फालेको स्पष्ट देखिएको स्थानीय बताउँछन ।
घटनामा को को संलग्न छन ?
स्थानीयले रिनाको हत्यामा कमल नेपाललाई शंका गरेका छन । उनी प्रहरी नियन्त्रणमै रहेका छन । उनी सँगको बाराम्बारको सम्पर्कका आधारमा पनि उनलाई शंका गरिएको हुन सक्छ । उनी निर्दोष पनि हुनसक्छन । यी बिषयमा अहिले नै सबै कुरा भनिहाल्नु उपयुत्त नहोला । केही स्थानीय रिना सँग अरुको पनि संगत रहेको र उनीहरुलाइृ नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग राखिरहेका छन । कमलको बिगत हेर्दा आफनै केही नातेदार र साझेदार लाई समेत पटक पटक धोका दिएका कारण पनि उनको हात बढी हुन सक्ने स्थानीयको आशंका रहेको छ । यो बिषयमा प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्बजनिक गर्नु र स्थानीयले फेरी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाताबरण सिर्जना नगराउनु जरुरी छ । -पथरीबाट गोपाल काफ्ले र नरेन्द्र बस्नेत